Jizọs | Ihe Baịbụl Kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
“Ọ dịghị mmadụ hụtụrụla Chineke mgbe ọ bụla.” —Jọn 1:18.
Ọtụtụ ndị na-ekwu na Jizọs abụghị Chineke. Ma, ụfọdụ ndị na-ekwu na e nwere amaokwu Baịbụl ndị na-egosi na Jizọs na Chineke hà.
Baịbụl ekwughị na Jizọs bụ Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, o kwughịkwa na ha abụọ hà. Kama, o kwuru na Chineke ka Jizọs. Dị ka ihe atụ, Jizọs kwuru, sị: “Nna m ka m ukwuu.” (Jọn 14:28) Baịbụl kwukwara, sị: “Ọ dịghị mmadụ hụtụrụla Chineke mgbe ọ bụla.” (Jọn 1:18) Ma, ọtụtụ ndị hụrụ Jizọs mgbe ọ bịara n’ụwa. N’ihi ya, ọ bụghị Chineke.
Ndị na-eso ụzọ Jizọs ekwughị na ọ bụ Chineke. Dị ka ihe atụ, Jọn onyeozi dere, sị: “E dere ihe ndị a ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke.”—Jọn 20:31. *
“E nwere ndị ọzụzụ atụrụ ndị bi n’ọhịa. Ha na-eche ìgwè atụrụ ha nche n’abalị.”—Luk 2:8.
Ụfọdụ ndị na-agba Krismas n’ụbọchị iri abụọ na ise n’ọnwa Disemba n’ihi na ha na-ekwu na ọ bụ ụbọchị ahụ ka a mụrụ Jizọs. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ n’ọnwa Jenụwarị ka a mụrụ ya.
Baịbụl ekwughị ụbọchị a mụrụ Jizọs. Ma, o kwuru na mgbe a mụrụ ya, ‘e nwere ndị ọzụzụ atụrụ ndị bi n’ọhịa, na-eche ìgwè atụrụ ha nche n’abalị.’ (Luk 2:8) O nweghị ka ndị ọzụzụ atụrụ ahụ ga-esi chịrị atụrụ ha nọrọ n’èzí n’abalị n’ọnwa Disemba ma ọ bụkwanụ n’ọnwa Jenụwarị. N’ihi gịnị ka anyị ji kwuo otú a?
Ọ bụ n’ihi na n’ebe a mụrụ Jizọs, ezigbo oyi na-atụ n’ọnwa Disemba nakwa n’ọnwa Jenụwarị. Baịbụl kwuru na n’oge Disemba na Jenụwarị, ndị mmadụ “na-ama jijiji n’ihi . . . mmiri ozuzo.” (Ezra 10:9, 13; Jeremaya 36:22) N’ihi ya, oge ahụ abụghị oge ndị ọzụzụ atụrụ ga-eji chịrị atụrụ ha gaa ‘biri n’ọhịa.’
“Chineke si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite [Jizọs].”—Ọrụ Ndịozi 3:15.
Ụfọdụ ekwetaghị na e nwere ike ịkpọlite onye nwụrụ anwụ. Ha ekweghịkwa na Jizọs si n’ọnwụ bilite.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-ata ya ọtụtụ ahụhụ, gbuokwa ya. O kwukwara na a ga-akpọlite ya n’ụbọchị nke atọ. (Matiu 16:21) Baịbụl kwuru na mgbe a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ, ihe karịrị narị mmadụ ise hụrụ ya. (1 Ndị Kọrịnt 15:6) Ndị ahụ hụrụ ya enweghị obi abụọ na o bilitere n’ọnwụ. E gbudịrị ụfọdụ n’ime ha n’ihi na ha kwetasịrị ike na Jizọs si n’ọnwụ bilie.—Ọrụ Ndịozi 7:51-60; 12:1, 2.
Baịbụl kwuru na ọnwụ Jizọs nwụrụ na otú Chineke si kpọlite ya n’ọnwụ ga-abara ụmụ mmadụ uru. Uru ha ga-erite bụ na ha ga-ebi n’ụwa mgbe Chineke ga-eme ka ọ ghọọ Paradaịs. (Abụ Ọma 37:11, 29; Mkpughe 21:3, 4) Ọ bụ maka na Jizọs na Nna ya bụ́ Jehova hụrụ anyị n’anya mere anyị ji nwee olileanya ịdị ndụ ebighị ebi n’ụwa mgbe ọ ga-aghọ Paradaịs, bụ́ ebe anyị ga-enwe obi ụtọ.—Jọn 3:16; Ndị Rom 6:23.
^ para. 7 Baịbụl ekwughị na Chineke lụrụ nwaanyị, ya amụtara ya ụmụ. Kama, ihe mere e ji akpọ Jizọs “Ọkpara Chineke” bụ na Chineke ji aka ya kee ya. Ọ na-akpakwa àgwà ka Chineke.
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Jizọs?